Ciidanka AMISOM iyo Alshabaab oo ku dagaalamay degmada Qoryooley. – Radio Daljir
Ciidanka AMISOM iyo Alshabaab oo ku dagaalamay degmada Qoryooley.
Luulyo 17, 2016 11:23 g 0
Qoryooley, July 18 2016-Wararkii ugu dambeeyey ee aan saaka helayno ayaa sheegaya in saaka ay degan tahay xaaladda degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose oo ay ku dagaalameen AMISOM iyo Alshabaab.
Degmada Qoryooley ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay ka bilowday dagaal u dhexeeya Alshabaab iyo AMISOM kadib markii ay halkaasi lawareegeen maleyshiyaad katirsan ururka Alshabaab.
Goob joogayaal kusugan Qoryooley ayaa sheegay in dagaalku uu bilowday kadib markii ay ciidamada AMISOM duulaan culus ku soo qaadeen magaalada Qoryooley oo ay saacado kahor xilligaas qabsadeen maleyshiyaadka Alshabaab.
Ilaa hadda khasaaraha kadhashay dagaalkaasi labada dhinac kama aysan hadlin laakiin waxaa lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare culus, maadaama dagaalka uu ahaa mid xalay laysla gaarey.